Bụrụ onye isi nke ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ My Hospital | Gam akporosis
Jikwaa ụlọ ọrụ ahụike gị na Hospitallọ Ọgwụ M, ihe ọkpụkpọ ọhụụ dị elu
Simulators anyị nwere ọtụtụ dịgasị iche iche na ha na gam akporo sitere na site Hay Day, emelitere kwa oge, dị ka nke ị ga-esi jikwaa otu ugbo dum, ọbụlagodi ndị si Kairosoft, dị ka Game Dev Story, nke ị ga-agba ọsọ ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo na-ebipụta aha na consoles na ụdị dị iche iche. Typesdị ndị a nke simulators nwere ọtụtụ omume ọma na ụfọdụ, dịka nke mbụ, jiri ike soro ndị egwuregwu ndị ọzọ mepụta obodo na inwe ike ree ọbụna ngwaahịa ị rụpụtara. Anyị ga-anabatakarị ihe nkedo nke na-ewetara anyị ezigbo mmetụta nke ịgba ọsọ na họtel, ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ ụlọ ọgwụ.
Nke a bụ ihe na-eme na Hospitallọ Ọgwụ M, a simulator na anọwo na Playlọ Ahịa Google Play ụbọchị ole na ole na nke ahụ na-egosi ezigbo agwa. Nke a ka ọ na-eme n'ihi na o nwere ogo dị omimi nke dị na ịme anwansị na ihe eserese eserese nke ọma iji nye agba na ọmịiko n'oge izizi anyị bidoro ịgụnye igwe na ụlọ ọhụrụ n'ụlọ ọgwụ anyị. Gba ọsọ n'ụlọ ọgwụ abụghị ọrụ dị mfe ma ebe a ị ga-arụpụta ọgwụ ndị ahụ ma tinye ha na ndị ọrịa rutere n'ụra na ụlọ mberede, yabụ njem njem ọfụma na-echere gị na egwuregwu vidio a nke nkọwa ahụ nwere a gbara akwụkwọ nke ọma ka ị wee soro ya ruo ogologo oge.
1 Ọ bụrụ na nke gị bụ Hay Day ma ọ bụ Farmville, ị ga-ahụ ya n'anya
2 Soro ndi enyi Facebook gi
Ọ bụrụ na nke gị bụ Hay Day ma ọ bụ Farmville, ị ga-ahụ ya n'anya
Na Hospitallọ Ọgwụ m, ị na-arụ ọrụ nke onye isi otu obere ụlọ ọgwụ nke ị na-elekọta ịgwọ ndị ọrịa, na-agbakwunye ndị dọkịta na ịgbasa ụlọ ọrụ niile. Nwere ike itinye ndị dọkịta n'ụlọ ọgwụ maka ụdị iche iche dị iche iche dị ka agụụ, akpụkpọ ma ọ bụ afọ.
Dọkịta ọ bụla chọrọ ọgwụ ma ọ bụ mmiri ọgwụ dị iche iche iji gwọọ ndị ọrịa ya. Ihe e kere eke nke syrups ma ọ bụ ọgwụ ndị a na-eme na ụlọ nyocha ahụike. Use na-eji igwe dị iche iche eme ihe eji arụ ọrụ, wees dọrọ ma dobe ha n'ime akpa ule nwalee. Ga-echere obere oge ruo mgbe e kere ha, ọ bụ ezie na ị nwere ike belata oge na obi. Nke a bụ ebe akụkụ freemium nke egwuregwu vidio na-abata na otu ejirilarịrị ma ọ bụrụ na ọ sitere na Hay Day na ndị ọzọ.
Ma bia, egwuregwu mmezi yiri ka Hay Day mgbe anyị na-ewe ihe ubi ma ọ bụ hapụ nri na ọkụkọ ka ha wee nwee akwa, n'ihi ya ị ga-enwe obi iru ala ma ọ bụrụ na ị gafere egwuregwu ahụ ma ọ bụ site na Farmville n'onwe ya.
Soro ndi enyi Facebook gi
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke Hospitallọ Ọgwụ m bụ na ị nwere ike banye na facebook, ya mere ọ bụrụ na ndị enyi gị na-egwuri egwu, ị nwere ike ịga ụlọ ọgwụ ha wee hụ etu ọ dị. Enwekwara ohere ichota ochicho mma dika osisi, igwe ihe na ebe oche.
Ọ bụ ezie na ọ na-emetụ isiokwu dị iche iche nke ụlọ ọgwụ, ọ bụ egwuregwu nwere mmetụ pụrụ iche site na ịhapụ onye ọkpụkpọ ahụ ịnụ ụtọ oge mbụ ya na ụfọdụ eserese mara mma. Ndi ozo ọ bụrụ na ị na-eji Hay Day na Farmville, ị ga - ahụ onwe gị ọsọ ọsọ dị n'etiti ụlọ ịwa ahụ, ụlọ ichere na ụdị ndị ọzọ nke ụlọ ọgwụ nwere.
Iwu ulo, ulo ogwu, ulo ogwu, ulo ogwu, osisi ogwu, syrups, elixirs, na echere gi. ihe karịrị 80 na-akpa ọchị ọrịa na ọtụtụ ndị ọzọ
Hospitallọ ọgwụ m dị n'efu site na Playlọ Ahịa Google na micropayments ndị doro anya.
Nyocha a hapụrụ ikike na nke a bụ kwesiri ngosi site na nke mbụ nke abụọ nke egwuregwu. Ọnọdụ ndị na-agba agba, ihe odide ndị mara mma ma dị mma, mmemme na-aga nke ọma, nrụnye zuru ezu, ụda zuru oke na usoro ihe eji etinye ya na elu nke ndị simulators kachasị mma. A simulator na-aga nke ọma iji jupụta awa efu anyị na ntụrụndụ dị mma.
Hospitallọ ọgwụ m
Onye edemede: 89%
Onye edemede: 88%
Ezigbo nhazi ọrụaka
Ihe osise mara mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Jikwaa ụlọ ọrụ ahụike gị na Hospitallọ Ọgwụ M, ihe ọkpụkpọ ọhụụ dị elu
Site na onye okike nke akụkọ mgbe ochie nwere ike Ime anwansi na-abịa okike Quest na gam akporo
Chụ nta na-alụ ọgụ na The Wolf, a ekwenye na ọtụtụ ebe ị bụ anụ ọhịa wolf